सावधान ! सुत्ने बेलामा भुलेर पनि नगरौं यस्ता गल्ती... | Ajako Aartha | Nepal's No. 1 Business News Portal
(Tuesday, 14 July, 2020)
सावधान ! सुत्ने बेलामा भुलेर पनि नगरौं यस्ता गल्ती...
कात्तिक २, २०७६ | आजको अर्थ
काठमाडौँ – पर्याप्त सुताई मानिसका लागि अपरिहार्य छ। तर सुत्नुभन्दा अगाडि गर्ने र उठिसकेपछि गर्ने कार्यमा विभिन्न तथ्य लुकेका हुन्छन् । सुत्नुअघि केही कुरामा विचार गरिएन भने अस्वस्थता र रोगको भारी बोकेर समस्यामा पर्न सकिने हुन्छ । सुत्नु अगाडि गर्न नहुने यस्ता केही काम छन् ती कामले तनाव तथा स्वास्थ्य समस्या निम्त्यान सक्छ।
सुत्नु अगाडि खानाः
रातको खाना सकेसम्म सुत्नु अगाडि खानु हुँदैन । यसरी खाना खानेबित्तिकै सुत्ने गर्नाले मोटोपनको समस्याले दुःख दिन सक्छ ।
सुत्नुअघि ल्यापटप वा मोबाइलः
सुत्नु भन्दा पहिले तपाई मोबाइल या ल्यापटप चलाइरहनु भएको छ भने पनि यसले तपाईलाई सुत्ने क्रममा समस्या दिन्छ । तपाईलाई यी ग्याजेटबाट निस्किने सिग्नलले मष्तिष्कलाई उठ्ने संकेत बारम्बार दिने हुँदा सुत्न समेत गाह्रो हुने गर्छ ।
युवाहरूमा चुइगम निकै लोकप्रिय छ र यो एउटा बानीको रूपमा पनि बसिसकेको छ धेरै युवाहरूमा । यदी तपाई सुत्ने बेलामा पनि पेपरमिन्ट फ्लेवरको चुइगम खाने गर्नुहुन्छ भने यसको गन्धले तपाईको निन्द्रा बिथोल्न सक्छ ।
किताब पढ्ने बानीः
केही मानिसहरू सुत्नुभन्दा अगाडि पढ्ने गर्छन् । कुनै कुनै बेला त पढ्ने क्रममा आफ्नो निन्द्रा समेत हराउने गर्छन् । यो भन्दा सुत्नुभन्दा करिब २० मिनेट अगाडि नै किताब पढ्न छोड्नु भयो भने तपाईको निन्द्रा राम्रो हुन्छ ।
यदी तपाईं राती चुरोट वा कफी पिउने गर्नु हुन्छ भने त्यसमा रहेको निकोटिन तथा कैफिनले तपाईको निन्द्रा बिथोल्न सक्छ । यसले शरिरमा तनावको स्थिति उत्पन्न गर्छ र निन्द्रा नलाग्न सक्छ ।
चिसो पानीले मुख धुनुः
राती सुत्नुभन्दा अगाडि तपाई यदी हात खुट्टा र अनुहार चिसो पानीले धुनुहुन्छ भने यो बानी बदल्नु राम्रो हुन्छ । सुत्नुभन्दा पहिले चिसो पानीले नभई मनतातो पानीले हातमुख धुँदा यसले मांशपेशीको तनाव कम गर्छ र मिठो निन्द्रा लाग्छ ।
निन्द्रामा यदी दुई पेग लगाउने बारे सोच्नुहुन्छ भने त्यो बानी हटाउनु राम्रो हुन्छ । अल्कोहलको सेवनले शरिरमा तनाव अधिक हुने गर्छ र निन्द्रामा असर गर्छ । सुत्नुअघि यी कुराहरुमा विचार पुर्याउनुभएन भने पछुताउन पनि पर्नसक्छ ।
अजोड इन्स्योरेन्सको आईपीओः अन्तिम दिनसम्म कति पर्यो आवेदन ?
बैंक-वित्त असार २९, २०७७
एनआईसी एसिया लघुवित्तको शेयर मुल्यमा आज पनि सकरात्मक सर्किट
सेयर मार्केट असार २९, २०७७
व्याजदरको भद्र सहमति तोडियो, अब बैंकहरुले आफुखुसी व्याज निर्धारण गर्न पाउने
बाढी पहिराबाट क्षती भएकालाई नगरपालिकाले पाँच लाख सहयोग गर्ने
समाचार असार २९, २०७७
एलजीको वासर ड्रायर वासिङ मेसिनको माग बढ्यो
कर्पोरेट असार २९, २०७७
कोरोनाले बेलायतमा दोस्रो लहरका कारण झन्डै १ लाख बढीको ज्यान जानसक्ने अनुमान
विश्व असार ३०, २०७७
नेप्से परिसूचक ५ अंकले बढ्यो,करीब १ अर्बको कारोबार
सेयर मार्केट असार ३०, २०७७
जलेश्वर कारागार डुबानमा
समाचार असार ३०, २०७७
७९०४५ प्रति १० ग्राम
९२२०० प्रति तोला
७८६७० प्रति १० ग्राम
९१७६० प्रति तोला
८५३ प्रति १० ग्राम
९९५ प्रति तोला
विश्व कात्तिक १४, २०२०
सेयर मार्केट कात्तिक १४, २०२०